गण्डकी प्रदेशमा थपिए ५० कोरोना संक्रमित, वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एककाे मृत्यु — Imandarmedia.com
गण्डकी प्रदेशमा थपिए ५० कोरोना संक्रमित, वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एककाे मृत्यु
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा थप ५० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा आज थप ५० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
नयाँ संक्रमितहरुमा कास्कीका २९ जना छन्, जसमा २८ जना पोखरा महानगरपालिकाका हुन् । यसैगरी गोरखाका १३ जना, तनहुँका ५ जना र बाग्लुङका ३ जना रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय कास्कीले जनाएको छ ।
बिहान ५० थपिएसँगै गण्डकीमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या ३१६६ पुुगेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा कोरोनको संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या १८९५ रहेको छ भने निको हुने दर ५९.९ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै उता कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सप्तरीका एक कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ । सप्तरी खडक नगरपालिका–३ का ३५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
२८ भदौमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका उनलाई ३० भदौमा प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारकै क्रममा आज (बुधबार) बिहान ६ बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार एक वर्षयता मिर्गौलामा समस्या भएका कारण उनी नियमित डाइलसिस गराइरहेका थिए । हप्तामा दुई पटक डाइलसिस गर्ने युवकमा उच्च रक्तचापको पनि समस्या थियो ।
यसअघि मंगलबार दिउँसो धरान उपमहानगरपालिका–१७ का ७३ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो । सप्तरीका युवकसँगै प्रदेश–१ मा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनको संख्या ५१ पुगेको छ । तीमध्ये १४ जना प्रदेश–२ र ३६ जना प्रदेश–१ का छन् ।
यसैबीच सरकारले कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा आइतबार भएको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ (आईसीएस) को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
बैठकको निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा विपन्नको उपचार निःशुल्क र अन्य संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लक्षण देखिएकाहरूको मात्र उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले आईसीएसको निर्णय कार्यान्वयनमा आए कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास प्रभावित हुन सक्ने बताए ।
एकसाथ एकै परिवारका ८ जनाकाे मृत्यु भएपछि शोकमा डुब्याे स्याङ्जा ?
काठमाडाैं सहित देशभर बिजुली जान थालेपछि ऊर्जामन्त्री पुनले चाले यस्तो कदम, होला त समस्या समाधान ?
यस्तो गाउँ, जहाँ मठ मन्दिरमा चमेराको पूजा हुन्छ ?
देशभर निरन्तर पानी परिरहेका बेला मौसमसम्बन्धि आयो अर्को नयाँ अपडेट, हेर्नुहोस बिस्तृत विवरणसहित
नेपालीहरुका लागि विश्वभरबाट आयो यस्तो खुसीको खबर, थमिएनन् धेरैका आँशु, सलाम यी मजदुरलाई
चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बिषयमा ओली सरकारले मुख खाेल्याे, यस्ताे रहेछ वास्तविकता
फेरि १ महिना लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस